Keylor Navas Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Keylor Navas Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na -egosi Full Story of Football Stopper, onye kacha mara aha ya; "Mr Save". Anyị Keylor Navas Child Akụkọ na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọrụ ya na ndị otu Real Madrid. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Keylor Navas 'Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Keylor Navas Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Keylor Antonio Navas Gamboa mụrụ na 15th nke December 1986 na nne ya, Sandra Gamboa na nna, Freddy Navas na San Isidro de El General, Costa Rica.
A mụrụ Keylor Navas n'ezinụlọ dara ogbenye dara ogbenye nke mere ka ndị mụrụ ya bụrụ ndị na -akwaga mba ọzọ.
Mgbe Keylor dị obere, nne na nna ya Sandra na Freddy malitere njem mbata na mba ndị ọzọ na America iji banye n'ime obodo wee chọọ ohere n'ala nrọ.
N'ihi na ọ bụ njem dị egwu nke jupụtara na ejighị n'aka, ma Freddy na Sandra hapụrụ, ogbenye Keylor (nke dị n'okpuru) onye naanị ya na nne nne ya na nwanne ya nwanyị nọ.
Nne na nna ya gosipụtara mwute ha banyere mkpebi ịhapụ nwa ha na nwatakịrị n'azụ. N'ajụjụ ọnụ, nne nne Navas, Sandra kwuru ihe ndị a;
Ọ bụ mkpebi jọgburu onwe ya na ị ga-ahapụ ịhapụ Navas na nwanne ya nwanyị, karịsịa ka nwa ya nwoke dị nanị afọ anọ.
Nnukwu Mkpebi ahụ: Tupu ịhapụ ala United States, Kaylor Navas nna mere mkpebi nke gbanwere ọdịnihu nke nwa ya na ezinụlọ ya.
Dị ka o kwesịrị, o wepụtara oge iji tinye ịhụnanya nke football n'ime nwa ya nwoke, na -adụ ya ọdụ ka ọ tinye aka na bọl.
Nke a hụrụ obere Keylor mgbe ọ dị afọ 5, na -egwu bọl. Mkpebi o kpebisiri ike ịbụ onye mgbaru ọsọ ọkachamara abụghị echiche efu.
Keylor Navas Nwatakiri Akụkọ - Njuju na Bilie na Aha:
N'ihi ndụmọdụ nna ya Keylor Navas gara ụlọ akwụkwọ bọọlụ Pedregosso afọ asaa yana ego nne na nna ya zọpụtara tupu ọpụpụ ha.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị ike ịbanye n'ime ndị otu obodo n'ihi ụfọdụ njirimara adịghị mma.
Keylor Navas chere ọtụtụ usoro ịjụ ihu n'ihi na a hụrụ ya dị ka onye na -adịghị ike nke anụ ahụ na ịdị elu na -adịghị eju afọ.
N'ikpeazụ, Luck bịara maka Keylor n'afọ 1995 mgbe klọb ala nna ya, Deportivo Saprissa nabatara ya. Ọ gbara ebe ahụ afọ iri, na -emeri nturu ugo isii.
Ụdị ya jidere anya ndị scouts si na klọb nke abụọ nke Spain, Albacete onye kpọbatara ya na Europe.
Keylor mgbe enyere ya ego na Levante kwenyesiri ike na klọb ahụ zụtara ya maka £ 100,000. Nke a nyere ya ohere igwu egwu na La Liga na 2012.
Ọ bụkwa akara oge akpọrọ Keylor na ndị otu mba Costa Rican ka ha na -akwado maka iko mba ụwa nke 2014 nke butere ya ịbụ onye ama ama.
Keylor ghọrọ otu n'ime ndị kasị mma nchebe nke asọmpi ekele a eriri nke nnụnụ nnụnụ na-azọpụta.
Ọ bụrụ na ị nwere ike icheta, ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ndị otu Costa Rica nke tụrụ Uruguay (Imeri ha 3 - 1) n'egwuregwu otu mmeghe nke asọmpi ha.
Ọzọkwa, o mere nzọpụta dị oke mkpa na ntaramahụhụ ntaramahụhụ megide Gris nke hụrụ Costa Rica ka ọ rute nkeji iri na asatọ nke iko mba ụwa nke mbụ.
Isi ihe iko ụwa nke Keylor dugara Real Madrid na-akpọ maka ọrụ ya ma na-ebute okwu nde yout 10 nde. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Keylor Navas Love Story na Andrea Salas:
Keylor Navas zutere nwunye ya n'ọdịnihu Andrea Salas n'ihi mkpebi ya ịga chọọchị ugboro abụọ n'izu. Ndị enyi abụọ ahụ so na ndị na-efe ofufe etiti izu na ụka ụka dị na Santa Ana n'afọ 2008.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
Anya ha jidere ibe ha mgbe ha na -aga ụka ma nke a kpalitere ụfọdụ mmetụta.
Ha abụọ kpebiri ịse foto ka emechara ọrụ ụka, nke a bụ mmalite nke akụkọ ịhụnanya ha nke dịgidere ruo taa (dịka n'oge edere).
Di na nwunye na-alụrụ di na nwunye otu afọ mgbe ha lụsịrị, kpọmkwem na Disemba 2009. Navas na Salas ugbu a nwekwara nwa nwoke, bụ Mateo.
Banyere nwunye Keylor Navas:
Andrea Salas bụ ịma mma na ụdị Costa Rica mbụ. O kpebiri ịkwụsị ọrụ ya mgbe ọ lụrụ Navas.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Andrea lụrụ di na nwunye na ụmụaka tupu ịgba alụkwaghịm abịa nke nwetara ịma mma ọzọ.
Dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a, ụmụ ya (Mateo Navas Salas na Daniela Navas Salas) site n'aka di ya mbụ ghọrọ akụkụ dị mkpa nke foto foto agbamakwụkwọ ya.
Andrea enwebeghị mgbe ọ bụ ọha na eze. O nweghi akwukwo Instagram, ya na foto ya di na peeji nke di ya. Andrea nwere ụmụnne nwoke abụọ tọrọ nke aha ha bụ Walter na Bairon.
Keylor Navas Ezinụlọ Eziokwu:
Ọ bụ bọọlụ gbanwere ezinụlọ ezinụlọ Keylor Navas site na ịda ogbenye dara ogbenye. Keylor nwere ụmụnne nwanyị abụọ bụ Keilyn na Kimberly.
Foto Kimberly dị n'okpuru, aka nri bụ nwanne nwanyị Kaylor ebe Keilyn sere onyinyo aka ekpe bụ nwanne ya nwanyị nke okenye nke bụ onye na -edozi isi na -ewu ewu na Costa Rica.
Ndị nne na nna: Dị ka n'oge ederede, nne na nna ochie Keylor ka dị ndụ. N’okpuru bụ foto nke Elizabeth Guzmán, nne nne Keylor, Sandra Gamboa nne ya na Juan Gamboa (nna nna ya), na-ekwu maka otu esi siere Keylor ike na mbụ.
Nne ya: Nne Keylor Navas, Sandra Gamboa nwere ụmụ nwanyị ndị yiri ya nke ọma maka ọdịdị ihu. Hermụ ụmụ ya nwekwara ụdị ọdịdị ahụ dị na foto dị n'okpuru.
Sandra na ụmụ ụmụ ya bụ Alonso na Bianka Rodriguez na-anọkọ oge dị ukwuu, n'obodo San Andres, na Pérez Zeledón, Costa Rica.
Nna ya: Nwoke ahụ n'onwe ya, onye mere ka ọrụ Keylor nwee ike ịbụ nna ya, Freddy Navas. Foto dị n'okpuru bụ Freddy bụ onye bụ isi na-erite uru n'ọrụ nwa ya.
Dịka a hụrụ na foto dị n'elu, Keylor Navas yiri nna ya, Freddy bụ onye na-elekọta ọrụ ya.
Keylor Navas Ndụ Nke Onwe:
Ọ dị umeala na obiọma: Dị ka nna ya, Freddy si kwuo;
“Enwere m obi ọjọọ na anya mmiri mgbe m nụrụ ka ọtụtụ mmadụ na-abụ aha nwa m nwoke na Bernabéu. Keylor gwara m na ndị egwuregwu niile so na ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Marcelo, Cristiano, James na ndị ọzọ niile, n'ihi na ọ dị obi umeala ma dịkwa jụụ. ”
Ịcha ntutu ya:
Mgbe Keylor Navas meriri La Liga na 2017, ọ na-eme ememe site n'ịkpụ isi ya iji kwado ụmụaka niile n'ụwa. Marcelo bụ onye kpụrụ isi ya.
Keylor Navas Nkwenkwe Okpukpe:
Navas bụ Onye Kraịst nwere obi ebere. O kwuru banyere okwukwe ya sị, “Chukwu maka m na-ebute ụzọ. Tupu egwuregwu ọ bụla, ana m egbu ikpere n'ala, saghee aka m abụọ kpee ekpere passage Akụkụ Akwụkwọ Nsọ kachasị amasị m bụ Ndị Galeshia 1:10 nke kwuru, sị:
Ọ bụrụ na m ka na-achọ ime ihe na-amasị mmadụ, agaghị m abụ onye na-ejere Kraịst ozi. ”
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Keylor Navas Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Ọkọlọtọ nke Costa Rica
Enwere m ezigbo mmasị na kpakpando a na-akpọ keylor Navas. Akụkọ ndụ ya na-akpali akpali. O mere ka m hụkwa peeji a nke Akwụkwọ Nsọ n'anya… Ndị Galetia 1:10 dị ka nwatakịrị na-eto eto na-abịa.
Marcio Fernandes kwuru
Onde está o din do keylor Navas